गण्डकी अस्पतालमा अख्तियारको छापा - Nepal Talk
पोखरा । पोखरा स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानस्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल (गण्डकी अस्पताल) मा अख्तिायारको टोलीले छापा मारेको छ। एमआरआई मेसिन खरिद र सामाजिक सेवा इकाइ सञ्चालनमा आर्थिक अनियमितता भएको उजुरीपछि अख्तियारको टोलीले आइतबार अस्पतालमा छापा मारेको हो। अख्तियारको टोलीले अस्पतालबाट केही कागजात पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। अस्पतालले गएको साल नै खरिद गरी करिब ७ महिना अगाडि नै एमआरआई मेसिन सञ्चालन गरेको थियो।
मेसिन खरिद र सामाजिक इकाई सञ्चालन गर्न आर्थिक लेनदेनका आधारमा जिम्मा दिइएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन थालेको हो। आइतबार मेसिन खरिद सम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिइएको छ । उपकुलपति डा. वुद्धिबहादुर थापा काठमाडौं रहेकाले सामाजिक इकाई सञ्चालन जिम्माबारे कागजात भने अख्तियारले नियन्त्रणमा लिन पाएन। उपकुलपति थापाले कागजात राखेकाले कागजात प्राप्त गर्न नसकिएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ।अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई बाइपास गरेर मूल्यांकन समितिले आर्थिक प्रलोभनमा सामाजिक सेवा सञ्चालनको जिम्मा असल छिमेकी सहयोगी संस्था गोनेसालाई दिइएको उजुरीमा उल्लेख छ।
डा. नरेन्द्रबिक्रम गुरुङको संयोजकत्वमा गठित मूल्यांकन समितिले आर्थिक लेनदेन गरेर अनियमित ढैगले गोनेसालाई इकाई सञ्चालनको जिम्मा लगाइएको आरोप छ। अस्पतालका निर्देशक निर्देशक अर्जुन आचार्यले भने त्यस्तो कुनै पनि आर्थिक अनियमितता नभएको बताउँछन् । ‘एमआरआई मेसिन गएको साल नै खरिद गरेर ७ महिना अघि नै सञ्चालनमा आएको हो। त्यस्तो कुनै पनि आर्थिक अनियमितता भएको छैन। भएको भए अनुसन्धानले देखाउला,’ आचार्यले भने, ‘इकाई सञ्चालनको विषयमा पनि कुनै अनियमितता भएको छैन। उजुरी पर्दैमा भ्रस्टाचार नै भएको हुँदैन।’
अनियमितताबारे उजुरी र अन्य सूचनाका आधारमा अस्पतालको कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको अख्तियार अनुसन्धान आयोग पोखराका सूचना अधिकारी मेघनाथ रिजालले जानकारी दिए । यही असार २३ गते सार्वजनिक सेवा इकाई सञ्चालन गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। गोनेसासहित ४ संस्थाले सञ्चालनका लागि आवेदन हालेका थिए।